सीमा बिवाद काण्ड : सम्हालिन खोज्दै वर्षा संजाेग - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सीमा बिवाद काण्ड : सम्हालिन खोज्दै वर्षा संजाेग
जेठ ११ गते आइतबार बिहान भाइरल भएकाे एउटा अन्तर्वार्ताकाे कारण वर्षा राउत सामाजिक सञ्जालमा आलाेचित बन्न पुगेको छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएर माफी मागेपनि धेरैले उनलाइ माफ गर्न सकेकाे छैन्न । मनिषाले दिएकाे एउटा अभिव्यक्त्तिकाे कारण उनले नेपालमा राम्राे चर्चा कमाइन् । भारतीय मिडियाले उनकाे खेदाे खने । तर नेपाली पनि के कम उनकाे समर्थनमा उत्रिए । राजेश हमाल देखि निखिल उप्रेतीसम्म उनकाे समर्थनमा उत्रिए । उसाे त नेपाली अभिनेत्रीहरुले पनि उनलाई मज्जाले साथ दिए ।
“वर्षाकाे भारतीय साथीलाई कसरी फेस गर्नु” भनेपछि उनका फ्यानहरु दुखी भए । केकी अधिकारी देखि लिएर निता ढुङगानाले समेत राष्ट्रियता सिकाउन भ्याए । पछि रिमा विश्वकर्मा भने उनलाई समर्थन गर्न आइन । वर्षाले माफी मागे पछि सबै माैन नै रहे ।
उनी भाबुक स्वभावकी भएकीले उनलाई सम्हालिन एकदम मुस्किल परेकाे बताइएकाे छ ।
. वर्षाले भनिन् : “म राष्ट्रियताको लागि मर्न तयार छु”
. वर्षालाई लक्षित गर्दै नीताले भनिन् : साथीभाई भन्दा राष्ट्रियता ठूलो हो
. वर्षाको बचाउमा रिमाले भनिन् : “कति बेला कस्ले के गल्ती गर्छ र उसमाथी खनिउ भनेर नबसौं”
नायिका राउतले माफि पनि मागिसकेकी छिन् । यो समयमा उनलाई साथ दिन र सहानुभुती दिनका लागि उनका फ्यान, शुभचिन्तक र आफन्तले हरसंभव कोशिश गरिरहेका छन् ।
यसैविच, नायिका वर्षा राउत र नायक संजोग कोइरालाले आफूहरु विस्तारै ठिक हुँदै गएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक संजालमा वर्षा र संजोगले सार्वजनिक गरेको सन्देशमा भनिएको छ–‘हामीमाझ विभिन्न माध्यमबाट यो समयमा जोडिन चाहने सबैलाई धन्यवाद । तपाइहरुको यही माया नै यो समयका लागि हाम्रो बलियो आधार हो । इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा, हामी शतप्रतिशत ठिक छैनौ ।’
संजोग र वर्षाले अगाडि भनेका छन्–‘यो विवादले हामीलाई असर नगरेको होइन तर पूर्ण रुपमा हामी टुटेको पनि छैनौ । हामी विस्तारै ठिक हुँदैछौ । यो नराम्रो समयमा हामी सुन्दर समयको खोजी गर्दैछौ र पीडामा मल्हम लगाउँदैछौ ।’
संजोग कोइरालाले इन्स्टामा पाेष्ट गरेकाे सन्देश
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, जेठ २१ २०७७ १६:५१:५७